ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကို network ကိုဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းအတွက် | မြျှောလငျ့ခ Medical Center မှ
မျှော်လင့်ခြင်း Medical Center မှအကြောင်း
Seoul Hope ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ
Incheon Hope ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ
Sangju Hope ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ
Tongyeong Hope ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ
Geochang Hope ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ
Yeongju Hope ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစင်တာ
ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများအတွက် ခွဲစိတ်ကုသစရိတ် ထောက်ပံ့ရေးစီမံကိန်း
ထိခိုက်လွယ်သော လူတန်းစား ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း
နိုင်ငံခြား NGO အဖွဲ့နှင့်အတူဆက်နွယ်ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ, ရပ်ရွာအခြေပြုစနစ်ဖြင့်အနီးကပ်ပူးပေါင်းပြီးဖန်တီးအသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ကွန်ရက်များတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးန်ဆောင်မှုများ၏အော်ဂဲနစ်ပေါင်းစည်းမှုကိုထောက်ပံ့ပေး.
သဘောတူညီချက်အရ Hope Medical Center နှင့် ဒေသခံလူထုအဖွဲ့အစည်းများမှ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆေးရုံရှိ အောက်တန်းကျသူများအတွက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှုများ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။. ဒါ့အပြင်သူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆက်လက်အရင်းအမြစ်များကိုအသီးအသီးအဖွဲ့အစည်းဝေမျှနှင့်ပူးတွဲသုတေသနနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာလဲလှယ်နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရန်သင့်အားကူညီပေးနေမှကျူးလွန်နေကြတယ်.
Hope Medical Center တွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းများ၏ တောင်းဆိုမှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပေါ် အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးတည်ချက်နှင့် လမ်းညွှန်ချက်တို့ကို ဆွေးနွေးနေပါသည်။. အသိုင်းအဝိုင်းမိတ်ဖက်များနှင့်ဝန်ထမ်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဦးတည်ချက်ကိုဆွေးနွေးခြင်းအားဖြင့်နှင့်ကွန်ယက်ကိုခိုင်ခံ့ထက်ဗဟိုဌာန၏အသိပညာနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ကာလအကြားကွာဟချက်ကိုလျှော့ချ.
ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံမိသားစုကုသမှု Concert ကျင်းပမည်
Copyright © 2012. ဂျက်အိတ်. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး.